January 2016 - iftineducation.com
iftineducation.com – Hadaba Mowduuca uuraysiga iyo madhalaysnimadu waa mowduuc aannu is leennahay aad iyo aad buu ahmiyad ugu leeyahay cid kasta oo Soomaali ah oo doonaysa inay guri degto ubadna daadihiso, maxaa yeelay waxaa ku jira macluumaad hadduu qofku fahmo uu kaga maarmi karo dhakhtar raadin iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee daba jiitamaya, kol hadday ummaddu isaga badan tahay taagooley aan xitaa…
iftineducation.com – Afeef:- Waa maxey biyabaxa deg-dega ah? Mudooyinkii u dambeeyay waxaa soo batay cabashada mowduucan, dadyow farabadan oo dhibaatadan heysato ayaa ka dalbadey qorayaasha soomaaliyeed ee ka faalooda arimaha bulshada (Social Issues) iney waxka qoraan aragtidan; mushkiladan oo culeyskeeda iyo saameynta weyn leh ayaan u istaagey inaan bal wax uun aan ka diyaariyo si tusaale iyo horudhac ugu noqoto qoraalo…
iftineducation.com – Guurka casriga ee Somalida wuxuu cagta geliyay ciriftii ugu dambeeysay ee la yaabka dunida,tani waa sheeko xiiso badan oo aan jecleeystay inaan qoro. Nadiifo waa gabadh ku nool Magaaladda Nairobi ee dalka Kenya gaar ahaan xaafadda Somalida ku badan tahay ee Islii, Nadiifo marka dhinaca quruxda laga eego dooqeeyga waa gabadha labaad ee gabdhaha Somalida Nairobi ugu quruxda badan,maashaa…
iftineducation.com – Baarintaano la soo waday in badan ayaa waxaa lagu guuleystay arimo badan kuwaas markii hore lagu baxshay dadaalo dheeri ah si loo helo baritaankas lagu baarayay kuwa fiican dumarka aan la guursan iyo kuwa guurka soo maray. Waxaa la soo ogaaday in ilaa afar waxyalood ay dumar garoobada ay kaga fiican yihiin dumar kale aan waligood soo marin guur…
iftineducation.com – Maxaa Keena Cuncunka gabdhaha xubanahooda taranka Ku imaada: Ogow Cilmiga in bulshada loo bandhigo lagama xishoodo… Marka haweenayda ay nadaafadda ku dadaali weyso waxaa u imaan kara cuduro oo dhib weyn u keeni kara xubnaha taranka dumarka, tusaale ahaan naagta waxaa laga rabaa inay iska nadiifiso mar walba cambarka waa inay iska xiirtaa shuunka mar kasta ma fiicna inay…
TURKIGA OO DIGNIIN U DIRTAY RUUSHKA, KADIB DIYAARAD RUUSHKA LAGA LEEYAHAY OO KU XADGUBTAY HAWADA TURKIGA
iftineducation.com – Xukuumadda Turkiga ayaa waxa ay digniin adag u dirtay Dowladda Ruushka, kadib markii Diyaarad laga leeyahay dalka Ruushka ay ku xadgubtay hawada dalka Turkiga. Recep Tayyid Erdogan, Madaxweynaha dalka Turkiga ayaa sheegay hadii Ruushka uusan ka fiirsan ku xadgudubka uu ku sameynaayo hawada dalka Turkiga inuu la kulmi doono caqaawib xumo. Duuliyaha Diyaarada ayuu sheegay in loo diray…
iftineducation.com – Cumar C/Rashiid Cali Sharmaarke Ra’isul wasaaraha Xukuumada Somaliya Ayaa sheegay in talaabo cad ay xukuumada ka qaadi doonto cidii ka tirsan Dowlada oo diida Go’aanka ay dowlada ku qaadatay Hanaanka 4.5 afar dhibic Shan. Ra’isul wasaare Cumar ayaa Sheegay in aysan aqbali doonin in siyaasada Dalka laga dhigo mid qof walba sida ay doonto ay ka yeelato waxa uuna…
iftineducation.com – Dowladda Turkiga ayaa mar kale ku eedeysay Ruushka in Jimcihii la soo dhaafay ku soo xadgudubtay Hawadooda, markii diyaarad dagaal ay soo gashay hawada meel ku dhow Xuduuda Suuriya. War ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Turkiga ayaa lagu sheegay in diyaaradaha Ruushka ay mar kale soo galeen hawada Suuriya, waxaana ay uga digtay cawaaqib xumada ka dhalan karta…
Barack Obama oo toddobaadka dambe booqanaya Masjid ku yaal dalka Maraykanka
iftineducation.com – Madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa markii ugu horeysay waxa uu booqanayaa toddobaadka soo socda masjid ku yaal dalka Maraykanka si uu u difaaco xoriyada diinta. Sarkaal u hadlay Aqalka Cad ee Maraykanka ayaa sheegay in booqashada masjidka ay la xiriirto sidii uu Madaxweyne Obama uu u muujin lahaa daaficida diimaha. Obama ayaa lagu wadaa in uu booqdo Arbacada…